विवाद र तनाब झेलेकी आलियाले बल्ल फेरिन् राहतको श्वास ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
विवाद र तनाब झेलेकी आलियाले बल्ल फेरिन् राहतको श्वास !
लामो समयसम्म पनि भारतमा कोरोना कहरमा कमी नआउँदा स्थिति असामान्य बनेको छ । विश्वको ठुलो मध्यको एक फिल्म इन्डस्ट्री बलिउड ६ महिना बढी समय देखी प्रभावित हुँदा निराशा फैलिएको छ । त्यसमाथी पनि सुशान्त सिंह राजपुतको निधनले बलिउडमा ठूलै हलचल मच्यायो । उनको निधले नेपोटिजमको कुरा उठेपछि त्यस्को मारमा आलिया भट्ट पनि परिन् । उनको फिल्म सडक २ ले सबैभन्दा धेरै डिस्लाईक पाइन् । उनको हातबाट धेरै फिल्म गएको र डिप्र शेनमा गएको खबरहरु पनि आएका थिए ।
यसैबिच अभिनेत्री आलिया भट्टको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘गंगुबाई काठियावाडी’को छायाङ्कन सुरु भएको छ । सञ्जय लीला भन्सालीको निर्देशनमा बन्ने यस चलचित्रको छायाङ्कन जनवरीभित्र पूरा गर्ने तयारी गरिएको छ । यति बेला चलचित्रको छायाङ्कन मुम्बईको फिल्म सिटीमा भइरहेको छ ।
सुटिङका क्रममा चलचित्रका कलाकार र अन्य सदस्यहरूको समय बचाउन र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न चलचित्रको छायाङ्कन रातको समयमा भइरहेको छ । बुजिए अनुसार टिमका सदस्यहरू दिनभर आराम गरेर रातभर काम गरिरहेका छन् । चलचित्रको छायाङ्कनका क्रममा चलचित्रसँग आबद्ध केही सदस्यहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित पनि देखिएको थियो ।
तर, पनि चलचित्रको टिमले छायाङ्कन रोकेको छैन । अभिनेत्री आलिया पनि चलचित्रको छायाङ्कनको लागी उत्साहित भएको बताइएको छ । गंगुबाई काठियावाडीमा अभिनेता अजय देवगनको केमियो भूमिका हुने र आलियाको अपोजिटमा रणवीर सिंह हुने चर्चा छ । यो चलचित्र सन् १९६० को दशकमा मुबईंको कमाठीपुरामा एउटा वेश्यालय चलाउने गंगूबाईको जीवनीमा आधारित छ ।
को हुन् आलिया भट्ट
आलिया भट्ट को जन्म १५ मार्च १९९३ भारतको मुम्बईमा भएको हो । उनी भारतीय चलचित्र क्षेत्रका एक बहुप्रसिद्ध अभिनेत्री हुन् ।
भट्ट परिवार मा जन्मिएकी आलिया, प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता महेश भट्ट र अभिनेत्री सोनी राजदनकी पुत्री हुन् । सन् १९९९ मा सङ्घर्ष नामक चलचित्रमा बाल-कलाकारको रूपमा फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी आलियाले सन् २०१२ मा स्टुडेन्ट अफ द इयर चलचित्रमा पहिलोपटक मुख्य भुमिका निभाएकी थिइन् जुन चलचित्रलाई करन जोहरले निर्देशन गरेका थिए ।
करन जोहरको धर्मा प्रडक्सन सँग सहकार्य गर्दै उनले केही प्रमुख चलचित्रमा मुख्य भुमिका निभाइन जस अन्तर्गत २ स्टेट्स (२०१४), हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया (२०१४), कपुर एण्ड सन्स (२०१६), डियर जिन्दगी (२०१६) र बद्रीनाथ की दुल्हनिया (२०१७) पर्दछन् । यिनै चलचित्रको व्यवसायिक सफलताका कारण उनी बलिउडमा स्थापित भइन् ।
हाइवे (२०१४) फिल्ममा गरेको गम्भिर र भावनात्मक प्रस्तुतीका कारण उनले समालोचनात्मक प्रसंशा पाइन् र फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जितिन् ।
त्यस्तै अपराधिक नाटक “उड्ता पन्जाब (२०१६)” मा गरेको प्रदर्शनका कारण उनले उत्कृष्ट अभिनेत्रीका लागि दिइने फिल्मफेयर अवार्ड जितेकी थिइन् । सन् २०१८ मा, राजी फिल्ममा उनले एउटा जासुसको भुमिका निभाइन जुन फिल्म मुख्य पात्र महिला भएका फिल्ममध्येमै सबैभन्दा धेरै व्यवसायिक सफलता हाँसिल गर्न सफल बन्यो ।
कलाकारिताका अलावा, आलियाले आफ्नै कपडा र हाते-झोलाको व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि कदम चालेकी छन् र “को-एक्जिष्ट” नामक पर्यावरणीय योजनाको सुरूवात गरेकी छन् । यसका साथै उनले आफू अभिनित चलचित्रहरूमा जम्मा ६ वटा गीत पनि गाएकी छन् जसमा “सम्झावन अनप्लग्ड” (२०१४) पनि पर्छ ।
उनका बुबा गुजराती मूलका हुन् र उनको आमा काश्मिरी पंडित र जर्मन वंशका हुन् ।उनीसँग बेलायतको नागरिकता छ ।उनकी जेठी बहिनी शाहीन र दुई साढे भाई-बहिनी पूजा र राहुल भट्ट छन्। अभिनेता इमरान हाश्मी र निर्देशक मोहित सूरी उनका नजिकका आफ्नत हुन्, जबकि निर्माता मुकेश भट्ट उनका काका हुन् । भट्टले जमनाबाई नरसी स्कूलमा शिक्षा हासिल गरेका थिए।
उनको बाल्यकालको बारेमा वर्णन गर्दै भट्टले भनेका छन, “मेरो बरु एउटा आधारभूत र सँधै पालनपोषण भएको थियो। मैले सुख प्राप्त गरेन किनकि मानिसहरूले मान्दछन् कि म पाउँछु किनकि म महेश भट्टकी छोरी हुँ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, असोज २२ २०७७ १९:०९:५०